Felicity Ama Agyeman (wɔwoo no ɔsanaa bosome a ɛt)so du-num, apem baako ,aha nkron aduason-nson) a dodow naa nim no sɛ Nana Ama Mcbrown yɛ Ghana sine twafo, nwom kyerefo ne kasafoni dwumayɛni. ɔsore dakoro bi bɛyɛ nipa titiriw a ɛyɛ ne dibea a odi no sine a wɔfrɛ no “Tentacles” so. Akyeri no na ɔkwadere ne dibea no nu yiye na odii akyeri wɔ Abibifo yɛn kasa sine a wɔfrɛ no Asoreba.
Wɔwoo Nana Ama wɔ Kumasi (Asante man mu) Ghana, ɛyɛ ɔsanaa bosome a ɛtɔso du-num, apem baako ,aha nkron aduason-nson). Ne maame Cecilia Agyenim Boateng, ne ne papa Kwabena Nkrumah,gyae awareɛ abere a na Nana Ama yɛ abofra. Ne papa ka ‘nkyene gue’ na nniɛma mu yɛ den maa ne maame a na ontumi mmoa ɔno ne ne nua nsia n’a aka no Ɔbarima bi a wɔfr3 no Kofi McBrown ne ne Sewaa, madam Betty Obiri Yeboah bɛfaa no ne ne nuanom nsia no kɔ tenaa nenkyɛn. Ɛnam saa no nti Nana Ama se sɛ ne mmofra bere mu yɛɛ den maa no.
Nana Ama ne ne nuanom nsia no nyinin wɔ Kwadaso, Asanteman mu (Kumasi), wɔn ne wɔn Sewaa ne wɔn Papa a ɔfa wɔn tenaa ne nkyen no. De bɛsi nnɛ, ɔfrɛ ne Sewaa no sɛ ne maame ankasa, na w’aka ne nnaase akyerɛ ne sewaa no sɛ w’ama wɔn baabi pa atena (anaasɛ) asetena pa Sukuu a Nana Ama kɔe yɛ “St. Peter’s International Residential school, na ɔkɔɔsoa kɔɔ Minnesota International ne Central International. Ɔtoaso kɔɔ Kwadaso L.A. J.S.S, ɛno mu na wantumi atoaso ankyerew ‘Basic Education Certificate Exams no bi.
McBrown de ne ho kɔ bɔɔ sine twa ho. Odi dwumapa bi wɔ kasafidie so bere a ‘Miracle Film’ ɛfrɛ so ma wɔde no bɛbataa wɔn sɛ ɔno na ɔbɛsiesie wɔn a wɔrekɔtwa sine no hoansa. Mmom wɔ sine twa mu no, ɔbɔɔ ne ho mmɔden maa ne panyin, Samuel Nyamekye hu sɛ ɔyɛ adeɛ ne dibea mu. Afe mpem mienu ne baako mu no, ne sine a edi kan no yɛ ‘That Day’, ɛno na ɛmaa n’anisoadehunu pue.
N’akansie wɔ ‘That Day’ no mu bue apono ahorow ne dibea pii maa ede no kɔsi sine ‘Tentacles’ so.
Wɔ afe mpem mienu ne nson mu no, ɛyɛ sine, Asoreba a Agya Koo ne Mercy Aseidu wo mu no dane edin Nana Ama bɛyɛ edin obiara nim. Efiri hɔ no, ne mmɔdenbɔ ne ntɔkɔsoɔ no ama dodow naa agye ne sine ato mu.
Wɔ kaa Nana Ama ne Omar Sheriff Captain , Abrantie a ɔne no atwa sine dodow naa mmom no na dodow naa keka sɛ ɔne ne hyehyɛ hɔ nso Nana Ama se ɛni mu sa.
Nana Ama Mcbrown ne Ghana nwom to ni Okyeame Kwame pue, ɛyɛ afe mpem mienu ne nan mu. ɛyɛ saa afe no mu, nnipa dodow naa hunu wɔn mienu sɛ wotutu akwan pii wɔ Ghana wiase afanaa mu nyinaa enam Okyeame Kwame nwom a na ɔda n’adi akyerew nti.
Da a ɛtɔ so du num, kitawonsa bosome mu ne afe mpem mienu ne nson, wɔsii Nana Ama Hemaa wɔ Assin-Basiako a ɛbɛn Assin-Fosu a ɛwɔ Assin apue man so, a ewɔ mfinimfini mantɛm, Ghana.
Ɔware ɔbarima dedaw a na ɔne no hyehyɛ hɔ pɛn, a wɔfrɛ no Maxwell Manu Mensah ɛyɛ afe mpem mienu ne edu nsia mu. Nana Ama woo ne ba a odikan wɔ Canada, ɛyɛ ɔbɛnim bosome ne afe mpem mienu ne du nkron.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Nana_Ama_McBrown&oldid=20106"
This page was last edited on 13 December 2019, at 22:13.